Yini okufanele ngiyenze uma upende noma ipensela, noma ngosizo igundane computer awazi, futhi ngifuna ukwakha isithombe sedijithali? Namuhla, abantu abaningi banesithakazelo umbuzo zendlela yokwenza isithombe njengoba ungenisa. Impendulo yalo ulula: zonke okudingeka uyenze - ukutadisha ngokucophelela impahla ekulesi sihloko futhi iwazi labo umkhuba.
Khuluma mayelana art
Ezinsukwini ubudala, ukuze uthwebule isikhathi, kwakudingekile ukuba ithalente kwezobuciko futhi isikhathi eside ukufunda, kodwa kulezizinsuku kukhona into efana isithombe, ngakho ukukwazi ukupenda akudingekile. Ngosizo lwezobuchwepheshe banamuhla singakwazi kweso ukudala yabo ucezu oluncane yobuciko. Kodwa khona zonke izinhlobo abahleli sokuqhafaza unikeza anhlobonhlobo ngamathemba ngobuciko ngokusebenzisa umdwebo nokuhlela isithombe, nokusebenzisa imiphumela ehlukahlukene.
Udweba kanjani isithombe?
Kunezindlela eziningana ezahlukene kanjani ukuze ujike isithombe ku isithombe sangempela. I elula kunazo - kuba ekuguquleni izithombe ngqo kusiphequluli sakho ku-intanethi. Kuyacaca ukuthi bonke izilungiselelo etholakalayo kukhona ejwayelekile futhi ingeke isithombe ngasinye. Eyesibili, indlela ikhiqize kakhudlwana - iwukuba sebenzisa ngokukhethekile wadala ngezinhloso zalezi zinhlelo. On the inthanethi inqwaba abahleli ehlukile, kuhloswe aguqulayo isithombe uhlobo iphethini. Inani izilungiselelo etholakalayo kuyoba isikhathi eside futhi uzokwazi ukufeza umphumela eyamukelekayo. Indlela engcono kakhulu ukusebenzisa umhleli ihluzo efana Photoshop (ngemuva kwalokhu - the "Photoshop"). Kulokhu, ukuhlela isithombe kwenziwa kwesandla sakho siqu, ngakho-ke umphumela wokugcina kuyoba okungcono.
Yiqiniso, imiphumela umxhwele kakhulu uthola ngokuyala isithombe noma chithi saka kusukela ezansi umculi, kodwa inhloso yethu ukwethula umsebenzi umhleli, ukuze wonke umuntu kalula indlela yokwenza isithombe njengoba ungenisa. Ngakho sisebenze ibhulashi izohamba abaculi kanye thina ukubhekana isimiso ekusebenzeni "Photoshop". Ayikho into elukhuni kule nkinga khona: uma ufunde imiyalelo ngokucophelela futhi igxathu negxathu ukwenza zonke lezi zinyathelo, bonke lula ukuthola. I umphumela kuyoba uyabukeka emehlweni, futhi uyokwazi ukufunda okuthile okusha.
Indlela yokwenza isithombe, ukudweba ipensela "Photoshop"?
Maningi amathuba ukwenza umdwebo we izithombe usebenzisa "Photoshop" lisho ukuthini. Ukuze uqale, cabangela indlela elula, ngemva kwalokho isithombe bayakuphendukela omnyama nomhlophe ipensela umdvwebo.
Vula isithombe ofuna kumhleli "Photoshop".
Kwesokudla kukhona iphaneli "Izinhla", elibonisa kuze kube manje eyodwa kuphela ungqimba yesithombe yethu - "Ingemuva". Kopisha noma usebenzise ilungelo inkinobho yegundane - "Layer ompindakabili", noma nje ngokuhudula kuye phansi isithonjana "Dala ungqimba olusha". "Ikhophi Ingemuva" livela uhlu izingqimba.
Manje sidinga desaturate ungqimba entsha ngokusebenzisa imenyu phezulu "Image - Ukulungisa - Desaturate". Sithola isithombe ngombala omnyama nomhlophe.
Ngemva uphinda ukukopisha emuva ngokusebenzisa imenyu phezulu Senza kwenye operation "Image - Ukulungisa -. Hlanekezela" Kuyinto kuyithuba lethu umbala - ukushintsha abamnyama ukuze omhlephe.
On the ungqimba ofanayo panel kwesokunxele uhlu evulekile ukukhanya izindlela bese ukhetha "Line clarifier." Lonke isithombe izovuleka ezimhlophe, futhi ungakwazi uqhubekele esinyathelweni esilandelayo.
Kulesi sigaba, thina umbu- ukudalwa nomphumela ipensela. Kungani usebenzisa "Hlunga - Okunye - Minimum" kwimenyu phezulu. Khona-ke phezu kungemuva elimhlophe livela elamukelekile emva isinyathelo odlule - umdwebo ipensela. Iwindi izilungiselelo zokuhlunga ezokwenza ukuvula ngokushesha emva isicelo "Hlunga - Okunye - Minimum" emkhakheni "Ububanzi" adalule 1, kodwa asikwazi uzizamele. I emikhulu engaba, aba maningi sibalo iyoba waphinda kube sengathi lapha esithombeni. Ngakho-ke, usayizi 1 ubhekwa elilungile, kodwa wakuvumela ukuba kancane ukwandisa - kuncike isithombe, kungenzeka ukunquma shazi. UMdwebo ngomumo.
Uma umphumela Akucaci ngokwanele, kungenzeka ukudlala izindlela kwendingilizi ngemva Hlunga "min '. Ngokwesibonelo, "Umbala Dodge". umbuso eyimpumelelo lapho Ucwaningo.
Futhi umphumela ethakazelisayo atholakala uma ungqimba maphakathi wenza ongabonakali kwephaneli ngakwesokunxele (chofoza ku "iso" eduzane negama ungqimba). Khona-ke, isithombe kuyoba ngombala.
Ukugcina nomphumela othize, kubalulekile ekufinyeleleni oyifunayo khetha top imenyu "Ifayela - Londoloza njenge ..." bese ugcine isithombe nomaphi kuyinto elula.
Indlela yokwenza isithombe njengoba imibala ngesineke? Ngosizo yokuhlunga okhethekile njengoba-Adobe inkampani, elitholakala ngokukhululekile kwi-Internet - I-Pixel Bender. In version Ps6 ke ifakwe ngaphambilini, futhi inguqulo isiRashiya ngokuthi "Amafutha Paint" futhi imenyu phezulu ngaphansi "Hlunga".
Lo mphumela kuhlaba kahle esibukeka ngayo izithombe lokho ezinye izindawo: izakhiwo mlando, namathafa namanje Lifes. Sebenzisa yona isithombe umuntu zingenza, kodwa umphumela kungaba edidayo.
Sebenzisa le ndlela yokuhlela kulula ngisho kwalowo odlule: wena umane ukuvula isithombe oyifunayo, bese iya kumenyu phezulu "Hlunga - Isizinda upende ...", bese ivula nesihlungi iwindi eyengeziwe lapho wena simonhlalo, nje ubone umphumela esizayo. Shintsha nemingcele ezimbili eziyinhloko - property emabhulashini, futhi izibani. Isithombe ewumphumela enhle kakhulu, futhi okubaluleke kakhulu, kubonakala sengathi yena ngempela ibhecwe emabhulashini nopende.
Njengoba kushiwo ngenhla, ziningi izinto sendlela ukwenza isithombe njengoba zaveza, kanjani ukwakha basilibale ngempela ukudweba isithombe ukucutshungulwa ukuphi. Ungakwazi sifinyelele umphumela ikhathuni, amakhathuni, amahlaya, imidwebo, sketching. Uhlu akahambe kuze kufike emcabangweni wakho tando suffice. Amathuba e medium abahleli ingcaca cishe angenamkhawulo - wena nje ungesabi ukufunda. Faka Photoshop, qala nge elula, amakhono kancane kancane, futhi ngeke zithole imiphumela ezinhle!